Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Lufthansa dia nanampy fiaramanidina Airbus A350-900 vaovao efatra ho an'ny sambo
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • fampiasam-bola • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Ny Airbus 'A350-900 dia voalahatra hiditra amin'ny serivisy miaraka amin'ny marika fototra Lufthansa hatramin'ny tapany voalohan'ny taona 2022, manamafy ny tolotra premium an'ny sidina dimy kintana.
Ny Lufthansa Group dia nanao sonia ny fifanarahana fanalefahana ho an'ny fiaramanidina enina maharitra enina lavitra an'ny Airbus A350-900.
Ny fiaramanidina dia mandray anjara lehibe amin'ny fitohanana maharitra kokoa amin'ny alàlan'ny tahiry 30 isan-jato sy ny tahiry CO2.
Lufthansa Group dia mikasa ny fametrahana fiaramanidina Airbus A350-900 vaovao tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2022.
The Vondrona Lufthansa dia manafaingana ny fanavaozana ireo andian-tsambo lava-be. Ny vondrona dia nanao sonia lease ho an'ny fiaramanidina Airbus A350-900 efatra manankarena sy mahomby amin'ny solika Avolon, SMBC Aviation Capital Ltd. ary Goshawk. Vokatr'izany, ny fiaramanidina A350 an'ny Vondrona dia hitombo ho fiaramanidina 21 amin'ny fiandohan'ny 2022.
The Airbus'A350-900 dia kasaina hiditra amin'ny serivisy miaraka amin'ny marika fototra an'i Lufthansa hatramin'ny tapany voalohany tamin'ny 2022, hanamafy ny fanolorana premium an'ny kaompania dimy kintana.
Dr. Detlef Kayser, mpikambana ao amin'ny Birao Mpanatanteraka Deutsche Lufthansa AG, hoy izy:
“Ny Airbus A350 dia iray amin'ireo fiaramanidina maoderina indrindra amin'izao androntsika izao. Tena mahomby amin'ny solika, tena mangina ary be toekarena kokoa noho ireo teo alohany. Ny mpanjifanay dia tsy mankasitraka ny faharetana ihany fa koa ny traikefa amin'ny sidina Premium miaraka amin'ity fiaramanidina ity. Ny fifanarahana fampanofana dia ahafahantsika miovaova amin'ny drafitra fiaramanidina ary manararaotra ny tombony azo amin'ny tsena miavaka. "
Ny motera kambana Airbus Ny fiaramanidina A350-900 dia mandany solitany 2.5 litatra isaky ny mpandeha isaky ny 100 kilometatra entina fotsiny. Izany dia manodidina ny 30 isan-jato latsaka noho ny teo alohany, miaraka amin'ny fiatraikany tsara eo amin'ny dian-tanan'ny karbaona. Ny fiaramanidina dia hisolo toerana voalohany ny fiaramanidina lavitra maharitra maotera efatra avy amin'ny fianakaviana Airbus A340. Tamin'ny tapaky ny folo taona, ny ampahany amin'ny fiaramanidina misy maotera efatra ao anaty fiaramanidina lava be toy ny iray manontolo dia antenaina ho latsaka ambany amin'ny 15 isan-jato. Talohan'ny krizy dia manodidina ny 50 isan-jato ny anjara.
Ankoatr'izay, ny fiaramanidina vaovao, mahomby solika dia hampihena ny vidin'ny fandidiana manodidina ny 15 isan-jato raha oharina amin'ireo karazana hosoloin'izy ireo.
Ao anatin'ny fandaharan'asa fanavaozana ny andiany maharitra, ny Vondrona Lufthansa dia hanefa fiaramanidina 177 fohy, antonony ary halavirana XNUMX fanampiny mandritra ity folo taona ity.
Robert Charles hoy:
Oktobra 6, 2021 ao amin'ny 07: 33
Ny Airbus A350 no fiaramanidina lavitra indrindra maoderina sy sariaka tontolo iainana. Nilaza i Lufthansa fa nanaiky ny hampanofa fiaramanidina mpandeha lavitra elanelana Airbus A350-900 vaovao izy ireo, handray fiaramanidina vaovao tavela tsy manana trano.